CHIASSO VS AC MILAN 0-5….Lapadula & Niang oo laba cad ka dhigay Chiasso! + Sawirro & googoos – Gool FM
CHIASSO VS AC MILAN 0-5….Lapadula & Niang oo laba cad ka dhigay Chiasso! + Sawirro & googoos
Raage October 8, 2016
(Chiasso) 08 Ok 2016 – Koooxda AC Milan ayaa dhulka ku jiiddey kooxda reer Swiss ee Chiasso oo ay 5-0 ku dubteen iyadoo uu ka xiddigeeyay Gianluca Lapadula oo laba dhaliyay, waloow uu M’Baye Niang mid dhaliyay, afarna dhigay.
Goolasha Kooxda AC Milan oo ay ilaa 13 laacib uga maqan yihiin waajibaad qaran ayaa waxaa labada kale u kala dhaliyay Andrea Poli iyo Luiz Adriano.
Kulankan ayaa fursad u ahaa laacibiinta aan inta badan helin fursad safka 1-aad ah oo ay kooxda ugu ciyaaraan sida Sosa, Vangioni, Lapadula, L. Adriano IWM.
Lapadula 7, 20, Poli 13, Niang 18, Luiz Adriano 29
Milan: Gabriel (Guarnone 85), Abate (Zanellato 75), Ely, Vancioni, Paletta (Zucchetti 70), Sosa (Pobefa 85), Poli (Curto 85), Suso (De Piano 75), Lapadula, Niang (La Ferrara 75), Luiz Adriano (Marchesi 85)
Halkan ka DAAWO googooska…
GOOGOOSKA: Germany vs Czech Republic 3-0
GOOGOOSKA: England vs Malta 2-0